पब्जी खेल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र खुला गर्ने अदालतको फैसलाबारे के भन्छन् काठमाडौंका युवा ? (भिडियो) | Hamro Aawaj
पब्जी खेल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र खुला गर्ने अदालतको फैसलाबारे के भन्छन् काठमाडौंका युवा ? (भिडियो)
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित खेल पब्जीमाथि गत चैत २८ गते सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । तर वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश दियो ।
पब्जी खेललाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेपछि यसबारेमा समर्थन र विरोधका दुवै खाले प्रतिक्रियाहरु आए । यूवा पूस्तामा लोकप्रिय रहेको यो खेलमा भूलेर बालबालिकाले पढाई बिगारेको भन्दै अभिभावकहरुले खुसी पनि व्यक्त गरेका थिए ।
यो खेलका कारण आत्महत्यासम्मको घटना हुन थालेको भन्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर शुक्रबार सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलासले पब्जी खेल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । साथै यो खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश समेत दिइयो ।
यो खेलमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि केही कानुन व्यवसायीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको भन्दै गत वैशाख ३ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।
हामीले काठमाडौंमा भेटिएका केही यूवाहरुलाई पब्जी खेल प्रतिबन्ध लगाउन ठीक कि बेठीक भनेर प्रश्न गरेका छौं ?
धादिङ घर भएर काठमाडौं बस्दै आएका रोशन सुवेदीले पब्जी खेल बन्द गर्न नहुने बताए । दैनिक ६ घण्टासम्म पब्जी खेल्दै आएका उनले समय मिलाएर खेल्नुपर्ने बताए । कतै केही दुर्घटना घटेको भन्ने कुरा खेलका कारण नभई मानिसको असावधानीका साथ भएको उनको बुझाई छ ।
उनले भने– ‘पब्जी बन्द गरेर काम छैन । पछि फेसबुक काम छैन भनेर फेसबुक बन्द गर्ला । जतिसुकै विकास भएपनि अन्त्यमा फोनको काम उठाउने र राख्ने मात्र भयो भने के काम ?’
तातोपानी जुम्ला घर भएका दिलबहादुर कठायतले पनि पब्जी मनोरञ्जनात्मक खेल भएकोले बन्द गर्न नहुने बताए ।
उनले भने– ‘यो पब्जी नै बन्द गरेर हुनेवाला केही पनि छैन । मान्छेले चाह्यो भने अरु अरु गेममा पनि सहभागि हुन सक्छ । अन्य विकृतीतिर पनि लम्किन सक्छ नी । बरु अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई पब्जी कम समय खेल्न दिदाँ राम्रो हुन्छ ।’ उनले अदालतले पनि पब्जी खुला गरेर राम्रो गरेको बताए ।
अर्का यूवा सुमन श्रीवास्तवले पनि पब्जी बन्द गर्न नहुने धारणा राखे । उनले साना बालबालिकालाई बाबुआमाले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने र ठूलाहरुले आफैले बुझ्ने बताए । उनले भने– ‘शनिवार र आइतबार मैले पनि खेल्थेँ, तर आफूले कन्ट्रोल गर्न पनि सकिने रहेछ ।’
अर्का यूवा रामदक्त जोशीले बन्द गरेपनि केही घण्टाको लागि बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘विद्यार्थीहरु दिनभरी यसकै पछि लागेर भविष्य विगारिरहेको भएपनि सरकारले बन्द गर्दा केही समय मात्र बन्द गरेको भए हुन्थ्यो ।’
इन्टरनेटमा आधारित भएर खेलिने पब्जी खेल दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनीले बनाएको हो । सन् २०१७ मा प्लेयर अननोन्स ब्याटल ग्राउण्ड्स (पब्जी) खेल सार्वजनिक गरेको थियो ।
इन्टरनेटमा आधारित भएर कम्युटर वा मोवाइल फोनमार्फत खेलिने यो खेलमा एक सय खेलाडी लडाई मैदानमा लड्नका लागि तयार हुन्छन् । जुन खेलाडी अन्तिमसम्म बाँच्न सक्छ उ विजेता हुन्छ । अहिलेसम्म स्मार्टफोनमा पब्जी एप्स १० करोडभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ ।
यो खेलका कारण विभिन्न देशमा बालबालिका र यूवाहरुमा नकारात्मक असर परेको भनेर प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ । नेपालमा यो खेलमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र खुला गर्न अदालतले दिएको आदेशबारे यूवाहरुको भनाई यस्तो छ ।
Previous: माेटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
Next: प्राकृतिक प्रकोपमा परी ४५४ को मृत्यु, साढे चार अर्बको क्षति